Buy အဆီကျကော်ဖီ (8,500Ks) in ရန်ကုန် on ipivi.com
ရောင်းချသူ: Lady Online Shop
ဘယ်​​လောက်​စားစား (၁)ပတ်​အတွင်း သိသိသာသာအဆီကျ​စေမည့်​ 100% အာမခံအဆီကျကော်ဖီ- 15ရက်စာတဗူး8500ပါတလစာအတွက် 2ဗူးယူမယ်ဆိုရင်15000ပါ
***​ဆိုးကျိုးကင်းပြီး မူးဝေရင်တုန်​ ​မောပန်းခြင်းလုံးဝမရှိ။ အဆီကျရုံတင်မကဘူးနော် #အဆီကျိတ်တွေကိုပါ ကျစေနိုင်ပါတယ်။
Vitacino Coffee 15ရက်အတွင်း အတွင်း၃​ပေါင်​မှ၅​ပေါင်​အထိကျပါတယ်​.
အွန်လိုင်းမှာနာမည်ကြီးပြီး အာမခံနဲ့တောင် ရောင်းနေတဲ့ Vittacino အဆီကျကော်ဖီလေးပါ
မနက်စောစော Vitaccino ကော်ဖီတခွက်သောက်ရုံနဲ့ ဝိတ်ကျနိုင်ပါ့မလား ?
#သံပုရာသီးလေးညစ်ပြီးသောက် ပါက ပို သိသာစေပါတယ်
�နို့တိုက်မိခင်/ ကိုယ်ဝန်ဆောင် /နှလုံး အစာအိမ် ရောဂါရှိသူများ သောက်သjုံးရန် မသင့်ပါ�
Message box သို့ Ph,09422527973 ကိုဆက်​သွယ်​နိုင်​ပါတယ်
ရောင်ပြန်ပါ P57 အဆီကျပိန်ဆေးအစ...
မူလလက်ဟောင်းအဆီကျပိန်ဆေးအစစ် 1 d...